Alarobia 10 Aprily 2019. – FJKM
Alarobia 10 Aprily 2019.
Mbola misy resaka momba ny sabata indray eto:
1-Hamelomana fa tsy hamonoana ny sabata
Fanaon’i Jesoa ny mankany amin’ny synagoga rehefa sabata. Mitoriteny sy manasitrana Izy ao. Nanontany mivantana ireo olona efa fantany fa miandry kendry tohina Azy Izy teto (and4) . Sitrana ny tànan-dralehilahy satria nino an’i Jesoa izy . Fa tezitra sady nalahelo Izy « noho ny hamafin’ny fon’ireo olona nanatrika teo » (and5) . Tena mafy amin’i Jesoa ny mahita antsika tsy mety mino Azy .
2-Niparitaka be ny vaovao momba an’i Jesoa
Olona marobe avy amin’ny lafivalon’ny firenena no nanaraka an’i Jesoa ( and 7,8) Nandre ny asa lehibe nataon’i Jesoa izy ireo . Tena mahataona olona hanaraka an’i Jesoa na dia ny filazalazantsika izay zavatra nataony tamintsika fotsiny aza . Ilay boka nositraniny ihany no norarany tsy hilazalaza (Mar 1.44) fa ireo marary sy demoniaka nositraniny kosa nampiely ny lazany . Efa tsy mandrara anao intsony hilaza ny nataony taminao izao i Jesoa (Mar 5.19) .
3-Nanome fahefana ny mpianany i Jesoa
Na dia mahafantatra Azy aza ny demonia, tsy miaraka miasa amin’ny demonia i Jesoa sanatrian’ny vava. Ny mpianany no notendreny hitoriteny sy hamoaka ny demonia . Sahia mampiasa ny fahefana nomen’i Jesoa anao fa famantarana manaraka ny mino tokoa izany .